လစဉ်လတိုင်း ပိုက်ဆံစုဖို့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း (၄)ခု - Lifestyle Myanmar
Home Lifestyle လစဉ်လတိုင်း ပိုက်ဆံစုဖို့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း (၄)ခု
လစဉ်လတိုင်း ပိုက်ဆံစုဖို့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်း (၄)ခု
လစဉ်ပေးဆောင်ရတဲ့ paymentတွေ၊ ကြွေးမြီတွေနဲ့ တခြားအကြောင်းရင်းတွေက ကျွန်ုပ်တုိ့ရဲ့ငွေစုနိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ လစာရလာတာနဲ့ အဝတ်အစားအသုံးအဆောင်ဝယ်ရတာတွေ၊ အိမ်မှာကုန်ကျတဲ့ ငွေတွေဟာ စုဆောင်းဖို့မပြောနဲ့ တစ်လနဲ့တစ်လ အလျှင်မမှီပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စုမယ့်ပိုက်ဆံကို သက်သက်ဖယ်ထားပြီး ဦးစားပေးပြုလုပ်နိုင်လျှင် ဒီကိစ္စက ရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ လစာရလာရင် အသုံးဝင်တဲ့ငွေပမာဏကို စုဆောင်းနိုင်လိမ့်မယ့် အကြံပေးချက် ၄ခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ငွေစုဆောင်းခြင်းက ကောင်းမွန်တဲ့လူနေမှုဘဝရရှိဖို့အတွက် အရေးပါပါတယ်။ လုံခြုံတဲ့ အသားတင်ငွေထားရှိခြင်းက အနာဂတ်အတွက် စီစဉ်ရတဲ့အခါ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ လစဉ်လတိုင်း ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုစုနိုင်သလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးမျှဝေပေးပါမယ် ။နောက်ပိုင်းမှာ သင်ကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံချွေတာခြင်းက ဘာ့ကြောင့် အိုင်ဒီယာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သလဲ?
စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုအတွက် ဒါမှမဟုတ် အပိုကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ ကြုံလာတဲ့အခါ ကူညီနိုင်တာကြောင့် ပိုက်ဆံအနည်းငယ် အမြဲတမ်း အရန် ထားရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လူအတော်များများက တစ်နေ့-တစ်နေ့ အခြေခံပေါ်မှာပဲ အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီး သူတို့ရဲ့အလုပ်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင် ပိုက်ဆံစုဆောင်းထားမှု မရှိခဲ့ရင် တစ်လအတွင်းမှာ ချွတ်ခြုံကျသွားနိုင်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံစုဆောင်းခြင်းက အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်ချခြင်းလို့တောင် ဆိုရမှာပါ။ သင်ဟာ လက်ရှိမှာနေထိုင်တဲ့ သူဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိနဲ့ မနက်ဖြန်ဟာ မတူညီတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိရသင့်ပါတယ်။ သင်ဟာ အမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေရပါမယ်။ ဘယ်ပျော်ရွင်မှုကိုမဆို ရပ်တန့်သင့်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အပိုပစ္စည်းတွေ ၊မလိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေမှာ သတ်မှတ်ချက်ထက်ပိုပြီး မဝယ်တာဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဝတ်အစားဝယ်တာ၊ အားလပ်ရက် အပန်းဖြေခရီးထွက်တာ၊ အပြင်ထွက်စားတာတွေက ပိုက်ဆံစုနိုင်စွမ်းကို သက်ရောက်စေတဲ့ များစွာသော အသုံးစရိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ပျင်းနေတဲ့အခါ၊ အကြိုက်ဆုံးစတိုးဆိုင်တွေမှာ ဒစ်စကောင့်အများကြီးချတဲ့အခါ ဝယ်တတ်ကြသလို အရောင်းရာသီကာလအတွင်းမှာလည်း အများကြီးသုံးတတ်ပါတယ်။
ပြင်ပအကြောင်းရင်းများကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာငွေပြတ်တာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ လစဉ်တိုင်း ပိုက်ဆံအနည်းငယ် ဘေးဖယ်ထားခြင်းက စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုပါ။
မလိုအပ်ဘဲ အဝတ်အစား၊ဖိနပ်တွေဝယ်ခြင်း သို့မဟုတ် night out ထွက်ခြင်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်းက ပိုက်ဆံစုဖို့ တကယ်ကူညီနိုင်ပါတယ်။
၁။ သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကို ချရေးပါ
ပိုက်ဆံချွေတာဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက သင့်ရဲ့အသုံးအစရိတ်အလေ့အထများကို သတိထားဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လအတွင်း သင်ပိုက်ဆံသုံးလိုက်တဲံ့ အသေးသုံးတိုင်းကို ချရေးခြင်းဖြင့် သင်ဒါကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရှောပင်ထွက်ပြီးနောက် သို့မဟုတ် လစဉ် ရေဖိုး/မီးဖိုး/အိမ်လခ စသဖြင့်ပေးဆောင်ပြီးနောက် Excel စာရင်းဇယား သို့မဟုတ် မှတ်စုစာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ချရေးထားပါ။
သင့်ရဲ့မှတ်စုတွေက ရုံးမှာ နေ့လယ်စာစားတာ၊ အလုပ်မှာကော်ဖီသောက်တာ၊ hand cream ဝယ်တာ ဒါမှမဟုတ် တက္ကစီခပေးတာ စသဖြင့် သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအများစုကုန်သွားတဲ့ နေရာတွေကို သတိပြုမိနိုင်တဲ့ အသေးစိတ်ဖြစ်ရပါမယ်။
သင့်ပိုက်ဆံသုံးလိုက်တဲ့နေရာတွေကို ဖော်ထုတ်ပြီးတာနဲ့ သင်ဟာ မလိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ၁၀၀တန်ကော်ဖီကို ဆိုင်မှာ ပိုက်ဆံပိုပေးပြီးသောက်မယ့်အစား အိမ်မှာသောက်တာ သို့မဟုတ် အလုပ်ကို ကော်ဖီဘူးထည့်သွားတာ စသဖြင့် ချွေတာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့နေ့လယ်စာကို ရုံးမှာဝယ်စားမယ့်အစား ထမင်းဘူးထည့်သွားတာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ အိမ်သုံးစရိတ်၊ ရေဖိုး/မီတာခ စတာတွေ၊ ဈေးဝယ်ကုန်ကျငွေတွေ ပေးနေရသူဆိုရင် လစဉ်လတိုင်း ခန့်မှန်းခြေဘယ်လောက်လိုမလဲဆိုတာ သိသင့်ပါတယ်။ဒီအသုံးစရိတ်ထဲကမှ လျှော့ချသင့်တာကို လျှော့ချရပါမယ်။ ဥပမာ- သင့်မီတာခက တတ်သွားပြီဆိုရင် တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်သာ အဝတ်လျှော်စက်သုံးတာ၊ နေ့ခင်းဘက်မှာ လျှပ်စစ်မီးတွေကို ပိတ်ထားတာ စသဖြင့် သင့်ရဲ့ပါဝါစားသုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ဘတ်ဂျက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်သုံးလိုက်သလဲဆိုတာ ပြသပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်သုံးနိုင်သလဲဆိုတာကို ကန့်သတ်မှုပေးတာကြောင့် ပိုက်ဆံချွေတာနဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာအကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။ အိမ်သုံးစရိတ်ရဲ့ တိုင်သုံးတိုင်ဖြစ်တဲ့ food, transport နဲ့ utilities အပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အထိ သုံးမလဲဆိုတာ ထည့်ပါ။
၃။ အရန်ပိုက်ဆံကို ချိန်ညှိခြင်း
ပိုက်ဆံစုဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ လူတွေပြုလုပ်တတ်တဲ့ အမှားကြီးတစ်ခုက Bill တွေ၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေ အားလုံးပေးဆောင်ပြီးတော့ ဘာမှမကျန်တော့မှ ဖယ်ထားတဲ့ ငွေတချို့ကို ချိန်ညှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီနည်းဗျူဟာက ငွေစုတဲ့အထဲကို ထည့်ဖို့ နည်းနည်းလေးပဲ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ သင့်လုပ်အားခရဲ့ ၁၀%ခန့်ကို စုဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ စုထားတဲ့ငွေကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေ၊ ကားပြဿနာများစတဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေမဟုတ်ဘဲ အလွယ်တကူ ထုတ်မသုံးမိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် သင်စုငွေက ဘယ်တော့မှ ရှေ့ဆက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၄။ သင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အကြွေးတင်တာကို လျှော့ချပါ
ဒီခြေလှမ်းက သင့်ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးကို တိုးတတ်စေဖို့အတွက်နဲ့ သင့်အနာဂတ်ကို အစီအစဉ်ချနိုင်ဖို့အတွက် အရေးပါပါတယ်။ ပထမခြေလှမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပစ္စည်းအသေးအမွှားကအစ ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့် ပေးဆောင်ခြင်းကို ရပ်တန့်ဖို့နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ငွေမချေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက အကြွေးတင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယအနေနဲ့ သင့်ရဲ့လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့ချဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အားလပ်ရက်တိုင်း အပြင်ထွက်စားတတ်ပါသလား? တစ်လမှာ တစ်ကြိမ်သာ အပြင်ထွက်ပါ။ သင်လစာရတဲ့အချိန်တိုင်း အဝတ်အစားဝယ်ပါသလား? (ဥပမာ-အလှူ/မင်္ဂလာဆောင်ရှိတာမျိုး၊ ဘွဲ့ယူရမှာမျိုး စသဖြင့်) အထူးပွဲအခမ်းအနားတွေအတွက်သာ အဝတ်အစားဝယ်ပါ။ အားလပ်ရက်တိုင်းကို ခရီးမသွားဘဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်နှစ် ၂ကြိမ်ခရီးထွက်တာ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒီနည်းက သင့်ငွေရေးကြေးရေးကို အနည်းငယ် သာယာစေပြီး ပိုက်ဆံစုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လစဉျလတိုငျး ပိုကျဆံစုဖို့ လှယျကူတဲ့ နညျးလမျး (၄)ခု
လစဉျပေးဆောငျရတဲ့ paymentတှေ၊ ကွှေးမွီတှနေဲ့ တခွားအကွောငျးရငျးတှကေ ကြှနျုပျတို့ရဲ့ငှစေုနိုငျစှမျးကို ကနျ့သတျထားပါတယျ။ လစရလာတာနဲ့ အဝတျအစားအသုံးအဆောငျဝယျရတာတှေ၊ အိမျမှာကုနျကတြဲ့ ငှတှေဟော စုဆောငျးဖို့မပွောနဲ့ တဈလနဲ့တဈလ အလြှငျမမှီပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ စုမယျ့ပိုကျဆံကို သကျသကျဖယျထားပွီး ဦးစားပေးပွုလုပျနိုငျလြှငျ ဒီကိစ်စက ရိုးရှငျးနိုငျပါတယျ။ ဒီတော့ လစာရလာရငျ အသုံးဝငျတဲ့ငှပေမာဏကို စုဆောငျးနိုငျလိမျ့မယျ့ အကွံပေးခကျြ ၄ခုကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
ငှစေုဆောငျးခွငျးက ကောငျးမှနျတဲ့လူနမှေုဘဝရရှိဖို့အတှကျ အရေးပါပါတယျ။ လုံခွုံတဲ့ အသားတငျငှထေားရှိခွငျးက အနာဂတျအတှကျ စီစဉျရတဲ့အခါ သို့မဟုတျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံခွငျးဖွငျ့ ငှရေေးကွေးရေး အခကျအခဲရငျဆိုငျရတဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့ကို ကူညီနိုငျပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးမှာ လစဉျလတိုငျး ပိုကျဆံကို ဘယျလိုစုနိုငျသလဲဆိုတာ ဆှေးနှေးမြှဝပေေးပါမယျ ။နောကျပိုငျးမှာ သငျကငျြ့သုံးနိုငျပါတယျ။
ပိုကျဆံခြှတောခွငျးက ဘာ့ကွောငျ့ အိုငျဒီယာကောငျးတဈခုဖွဈသလဲ?
စီးပှားရေး အခှငျ့အလမျးကောငျးတဈခုအတှကျ ဒါမှမဟုတျ အပိုကုနျကစြရိတျတှအေတှကျနှငျ့ အရေးပျေါအခွအေနနေဲ့ ကွုံလာတဲ့အခါ ကူညီနိုငျတာကွောငျ့ ပိုကျဆံအနညျးငယျ အမွဲတမျး အရနျ ထားရှိဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ လူအတျောမြားမြားက တဈနေ့-တဈနေ့ အခွခေံပျေါမှာပဲ အသကျရှငျနထေိုငျပွီး သူတို့ရဲ့အလုပျဆုံးရှုံးသှားခဲ့ရငျ ပိုကျဆံစုဆောငျးထားမှု မရှိခဲ့ရငျ တဈလအတှငျးမှာ ခြှတျခွုံကသြှားနိုငျပါတယျ။
ပိုကျဆံစုဆောငျးခွငျးက အနာဂတျအတှကျ အစီအစဉျခခြွငျးလို့တောငျ ဆိုရမှာပါ။ သငျဟာ လကျရှိမှာနထေိုငျတဲ့ သူဖွဈပမေယျ့ လကျရှိနဲ့ မနကျဖွနျဟာ မတူညီတဲ့ ဇာတျလမျးတှေ ဖွဈနိုငျတယျဆိုတာ သတိရသငျ့ပါတယျ။ သငျဟာ အမွဲတမျးပွငျဆငျနရေပါမယျ။ ဘယျပြျောရှငျမှုကိုမဆို ရပျတနျ့သငျ့တယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အပိုပစ်စညျးတှေ ၊မလိုအပျတဲ့ အသုံးစရိတျတှမှော သတျမှတျခကျြထကျပိုပွီး မဝယျတာဖွဈသငျ့ပါတယျ။ အဝတျအစားဝယျတာ၊ အားလပျရကျ အပနျးဖွခေရီးထှကျတာ၊ အပွငျထှကျစားတာတှကေ ပိုကျဆံစုနိုငျစှမျးကို သကျရောကျစတေဲ့ မြားစှာသော အသုံးစရိတျတှဖွေဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ ပငျြးနတေဲ့အခါ၊ အကွိုကျဆုံးစတိုးဆိုငျတှမှော ဒဈစကောငျ့အမြားကွီးခတြဲ့အခါ ဝယျတတျကွသလို အရောငျးရာသီကာလအတှငျးမှာလညျး အမြားကွီးသုံးတတျပါတယျ။
ပွငျပအကွောငျးရငျးမြားကွောငျ့ နောကျပိုငျးမှာငှပွေတျတာတှကေို ရှောငျရှားဖို့ လစဉျတိုငျး ပိုကျဆံအနညျးငယျ ဘေးဖယျထားခွငျးက စိတျကူးကောငျးတဈခုပါ။
မလိုအပျဘဲ အဝတျအစား၊ဖိနပျတှဝေယျခွငျး သို့မဟုတျ night out ထှကျခွငျးကို ဖွတျတောကျခွငျးက ပိုကျဆံစုဖို့ တကယျကူညီနိုငျပါတယျ။
၁။ သငျ့ရဲ့ကုနျကစြရိတျတှကေို ခရြေးပါ
ပိုကျဆံခြှတောဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးက သငျ့ရဲ့အသုံးအစရိတျအလအေ့ထမြားကို သတိထားဖွဈခွငျး ဖွဈပါတယျ။ တဈလအတှငျး သငျပိုကျဆံသုံးလိုကျတဲံ့ အသေးသုံးတိုငျးကို ခရြေးခွငျးဖွငျ့ သငျဒါကိုပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ ရှောပငျထှကျပွီးနောကျ သို့မဟုတျ လစဉျ ရဖေိုး/မီးဖိုး/အိမျလခ စသဖွငျ့ပေးဆောငျပွီးနောကျ Excel စာရငျးဇယား သို့မဟုတျ မှတျစုစာအုပျတဈအုပျမှာ ခရြေးထားပါ။
သငျ့ရဲ့မှတျစုတှကေ ရုံးမှာ နလေ့ယျစာစားတာ၊ အလုပျမှာကျောဖီသောကျတာ၊ hand cream ဝယျတာ ဒါမှမဟုတျ တက်ကစီခပေးတာ စသဖွငျ့ သငျ့ရဲ့ပိုကျဆံအမြားစုကုနျသှားတဲ့ နရောတှကေို သတိပွုမိနိုငျတဲ့ အသေးစိတျဖွဈရပါမယျ။
သငျ့ပိုကျဆံသုံးလိုကျတဲ့နရောတှကေို ဖျောထုတျပွီးတာနဲ့ သငျဟာ မလိုအပျတဲ့ အသုံးစရိတျတှကေို ဖယျရှားပဈနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ- ၁၀၀တနျကျောဖီကို ဆိုငျမှာ ပိုကျဆံပိုပေးပွီးသောကျမယျ့အစား အိမျမှာသောကျတာ သို့မဟုတျ အလုပျကို ကျောဖီဘူးထညျ့သှားတာ စသဖွငျ့ ခြှတောနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သငျ့ရဲ့နလေ့ယျစာကို ရုံးမှာဝယျစားမယျ့အစား ထမငျးဘူးထညျ့သှားတာ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
သငျဟာ အိမျသုံးစရိတျ၊ ရဖေိုး/မီတာခ စတာတှေ၊ စြေးဝယျကုနျကငြှတှေေ ပေးနရေသူဆိုရငျ လစဉျလတိုငျး ခနျ့မှနျးခွဘေယျလောကျလိုမလဲဆိုတာ သိသငျ့ပါတယျ။ဒီအသုံးစရိတျထဲကမှ လြှော့ခသြငျ့တာကို လြှော့ခရြပါမယျ။ ဥပမာ- သငျ့မီတာခက တတျသှားပွီဆိုရငျ တဈပတျမှာ တဈကွိမျသာ အဝတျလြှျောစကျသုံးတာ၊ နခေ့ငျးဘကျမှာ လြှပျစဈမီးတှကေို ပိတျထားတာ စသဖွငျ့ သငျ့ရဲ့ပါဝါစားသုံးမှုကို လြှော့ခနြိုငျပါတယျ။
ဘတျဂကျြတဈခုက ကြှနျတျောတို့ဘယျလောကျသုံးလိုကျသလဲဆိုတာ ပွသပွီး၊ ကြှနျတျောတို့ ဘယျလောကျသုံးနိုငျသလဲဆိုတာကို ကနျ့သတျမှုပေးတာကွောငျ့ ပိုကျဆံခြှတောနဲ့နရောမှာ ကြှနျတျောတို့ကိုမြားစှာအကူအညီဖွဈစပေါတယျ။ အိမျသုံးစရိတျရဲ့ တိုငျသုံးတိုငျဖွဈတဲ့ food, transport နဲ့ utilities အပျေါမှာ ဘယျလောကျအထိ သုံးမလဲဆိုတာ ထညျ့ပါ။
၃။ အရနျပိုကျဆံကို ခြိနျညှိခွငျး
ပိုကျဆံစုဖို့ ကွိုးစားတဲ့အခါ လူတှပွေုလုပျတတျတဲ့ အမှားကွီးတဈခုက Bill တှေ၊ ကုနျကစြရိတျတှေ အားလုံးပေးဆောငျပွီးတော့ ဘာမှမကနျြတော့မှ ဖယျထားတဲ့ ငှတေခြို့ကို ခြိနျညှိခွငျး ဖွဈပါတယျ။ သို့သျော ဒီနညျးဗြူဟာက ငှစေုတဲ့အထဲကို ထညျ့ဖို့ နညျးနညျးလေးပဲ ကနျြနခေဲ့ပါတယျ။ သငျ့လုပျအားခရဲ့ ၁၀%ခနျ့ကို စုဖို့ အကွံပွုပါတယျ။ စုထားတဲ့ငှကေို ဆေးဘကျဆိုငျရာအရေးပျေါအခွအေနေ၊ ကားပွဿနာမြားစတဲ့ အရေးပျေါ အခွအေနမေဟုတျဘဲ အလှယျတကူ ထုတျမသုံးမိဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။ ဒီလိုမှမဟုတျရငျ သငျစုငှကေ ဘယျတော့မှ ရှဆေ့ကျတော့မှာမဟုတျပါဘူး။
၄။ သငျ့ရဲ့ကုနျကစြရိတျမြားနှငျ့ အကွှေးတငျတာကို လြှော့ခပြါ
ဒီခွလှေမျးက သငျ့ရဲ့ငှရေေးကွေးရေးကို တိုးတတျစဖေို့အတှကျနဲ့ သငျ့အနာဂတျကို အစီအစဉျခနြိုငျဖို့အတှကျ အရေးပါပါတယျ။ ပထမခွလှေမျးတဈခုအဖွဈ ပစ်စညျးအသေးအမှားကအစ ခရကျဒဈကဒျနှငျ့ ပေးဆောငျခွငျးကို ရပျတနျ့ဖို့နှငျ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ ငှမေခြေးဖို့ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးက အကွှေးတငျခွငျးကို ရှောငျရှားနိုငျပါတယျ။
ဒုတိယအနနေဲ့ သငျ့ရဲ့လစဉျကုနျကစြရိတျကို လြော့ခဖြို့ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။ အားလပျရကျတိုငျး အပွငျထှကျစားတတျပါသလား? တဈလမှာ တဈကွိမျသာ အပွငျထှကျပါ။ သငျလစာရတဲ့အခြိနျတိုငျး အဝတျအစားဝယျပါသလား? (ဥပမာ-အလှူ/မင်ျဂလာဆောငျရှိတာမြိုး၊ ဘှဲ့ယူရမှာမြိုး စသဖွငျ့) အထူးပှဲအခမျးအနားတှအေတှကျသာ အဝတျအစားဝယျပါ။ အားလပျရကျတိုငျးကို ခရီးမသှားဘဲ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တဈနှဈတဈကွိမျ၊ ဒါမှမဟုတျ တဈနှဈ ၂ကွိမျခရီးထှကျတာ ပွုလုပျလို့ရပါတယျ။
ဒီနညျးက သငျ့ငှရေေးကွေးရေးကို အနညျးငယျ သာယာစပွေီး ပိုကျဆံစုနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Previous articleဖုန်းအားသွင်းကြိုးတန်းလန်းနဲ့ နားကြပ်တပ်ပြီး အိပ်ပျော်သွားတဲ့ ၁၆နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတစ်ဦးသေဆုံး
Next articleဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ဂျင်းထည့်နေတဲ့ အုပ်စုတွေရဲ့ ဂျင်းထည့်နည်းပုံရိပ်တွေ